Isi ụlọ ọrụ SADC iji kwado RETOSA na atụmatụ atụmatụ njem njem
Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » Isi ụlọ ọrụ SADC iji kwado RETOSA na atụmatụ atụmatụ njem njem
Isi ulo akwukwo ndi South African Development Community (SADC) na Gaborone, Botswana ekwenyela nkwado ma kwado ha nke oma na mpaghara ndi njem nleta nke mpaghara South Africa (RETOSA) iji hiwe mmekorita ma nweta nchekwa site na ndi oru ibe ha na mba ibe ha na uzo ahia.
Ndị isi ụlọ ọrụ si RETOSA nwere nzukọ na ndị ọrụ SADC Secretariat na Gaborore na ngwụcha ọnwa Ọktọba iji kparịta ụka nke ndị ozi maka njem nleta sitere na mpaghara South Africa ga-emecha kwuo.
Ebumnuche a bu ime ka mpaghara SADC nke njem nleta site na onu ogugu abuo nke ndi njem nleta zuru uwa na nnata na pasent ise n'ime iri.
Tụkwasị na nke a, RETOSA nwetara nkwado maka usoro dị iche iche a ga-anabata iji chọọ nkwenye n'aka ndị ozi SADC maka mmejuputa Phase II nke Trans-Frontier Conservation Areas (TFCA).
Onye isi oche nke Hospitallọ Ọrụ Ọbịa na Njem Nleta nke Botswana (HATAB) na onye isi oche ọhụrụ a họpụtara nke RETOSA Lily Rakorong kwuru na ihe ọhụrụ nzukọ ahụ bụ ịnwe mmekọrịta mmekọrịta siri ike na ndị ọrụ mpaghara mpaghara ka ha wee nwee atụmatụ izu ahia maka mpaghara ahụ.
O kwuru na “Ihe esi na nzukọ a pụta na SADC Secretariat ga-agwa ndị RETOSA onyinye ha maka nkwadebe maka nzukọ ndị njem SADC na-abịanụ, ndị ozi gburugburu ebe obibi na ihe ndị sitere n'okike nke a ga-eme na Johannesburg na 23 na 24 Nọvemba afọ a.
Ọ gbakwụnyere na "gọọmentị SADC nwere ọrụ dị mkpa ugbu a maka ịgbalite otu Njikọ Njem Njem Nleta (TCU) na Community Secretariat nke bụ isi ihe achọrọ maka ịmecha mgbanwe RETOSA,"
Ebe ọ bụ na RETOSA, dị ka enyemaka nke SADC Secretariat, na-akọ akụkọ ọhụrụ nke nri, ọrụ ugbo na ihe ndị sitere n'okike, ọ dị mkpa na RETOSA na-enwetakwa nkowa maka ịmalite nke Njikọ Njikọ Njem Nleta (TCU), ka o kwuru.
RETOSA na-atụ anya na TCU ga-enyere aka n'ịgwa nsogbu na nsogbu dị na amụma ndị njem na-egbochi itinye ego na njem na njem nke onye ọchụnta ego.
Kenneth Racombo, onye isi na-arụ ọrụ na RETOSA kwuru na ebumnuche bụ isi nke nzukọ n'etiti nzukọ na SADC Secretariat gbakwunyere usoro mgbanwe na REOTSA iji bido ịhazi njikọta na mmekorita n'etiti SADC na RETOSA, dị ka usoro enyemaka nke SADC chọrọ.
A tụlere ihe ndị ọhụrụ dị mkpa na-esote nhazigharị ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya nke RETOSA nke rụpụtara atụmatụ bara uru maka ndị nwere oke mkpa ya, yana ọhụụ ọhụụ nke a ga-enweta site na ịre ahịa na-aga n'ihu na itinye ego na atụmatụ.
Ọhụhụ ọhụụ a gbadosiri ike na mmekọrịta siri ike ya na ndị ọrụ onwe ha na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ - ọpụpụ dị elu na ngbanwe siri ike na usoro nke omume gara aga nke hụworo ka ndị gọọmentị ma ọ bụ ndị ọrụ obodo na-etinyekwu onwe ha.
Organizationtù ahụ na-achọkwa njem nlegharị anya nke mpaghara dị ka ihe dị mkpa maka akụnụba njem nlegharị anya na mpaghara ahụ
Smlọ Ọhụrụ oking Smụ Sịga Na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt
Choice Hotel Comfort Suites Paradise Island nke oke ifufe na nso nso a emetụtaghị
IATA: Izu ikuku ka o ruru elu na March 2021